ဘယ်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်များအတွက်အနောက်ပိုင်းလူတွေ့ဆုံရန်အလတ်တန်းစားတရုတ်မလေး၊ထိုင်းမိန်းကလေးအဘို့အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ - ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။
Ραντεβού με Σε, ή ένα βράδυ.
ငါလိုအ ဝင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယို ချိန်းတွေ့ ဗီဒီယို ဗီဒီယိုချက်တင်အသံလွှင့်အခမဲ့ တွေ့ဆုံရန်ဖို့မှတ်ပုံတင် အွန်လိုင်းချက်တင်အခမဲ့အွန်လိုင်းကစားတဲ့အခမဲ့ လိုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြော်ငြာ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း